Cabdi Nuur Sheekh Maxamed Isaxaaq oo Shaaciyay Inuu Iskaga Huleelay Idaacadii Afka Somaliga ee Bbc-da | Baligubadlemedia.com
Cabdi Nuur Sheekh Maxamed Isaxaaq oo Shaaciyay Inuu Iskaga Huleelay Idaacadii Afka Somaliga ee Bbc-da
February 15, 2019 - Written by admin
Idaacaddii aan ka shaqeyn jirnay ee dawladda Soomaaliya halku dhegeedu wuxuu ahaa ‘warbaahinta sida xalaasha ah uga
tarjunta mabaadida kacaanka’.
“Ha yeeshee BBC oo cid walba ra’yigeeda waydiineysa oo dhinacyada oo dhan u dhexeysa ayaa ku soo dhex dhacnay. Waxaa na hagaya waa mabaadi’da asalka ah ee saxaafadda ee BBC ee dhexdhexaadnimo. Waa taas midda keentay in xataa berigii dagaalka sokeeye ee Soomaaliya meesha u xun marayey oo qab-qablayaashii ay caasimadda ku dagaalamayeen in dagaalku is-taagi jiray 5:30 waqtiga ay idaacaddu bilaabto si dhinac walba u helo xogta dhinaca kale, xataa gobolada Soomaaliya oo aan la isu gudbi jirin, BBC ayey ka heli jireen wararka, waa horaantii 90-shameeyadii. Mudadii 30ka sano ku dhaweyd ee aan BBC London iyo Nairobi ka shaqeynayey waxaa walwalka u weyni iga hayey dalka oo colaad iyo kala irdhow aan taariikhda na soo marin uu ka dhacay oo aysanna muuqan 30 sano kadib xal ay dadku isku aamini karaan iyo dib u heshiin dhab ah”.
“BBC London waxaan ugu tagay oo la shaqeeyey wariyayaashii aan ku dayan jirnay oo aan ku taami jirnay sidii aan heerkooda oo kale u gaari lahayn, sida Cabdullaahi Xaaji Idris, Idris Xasan Diiriye, Maxamuud Sh Dalmar,Aadan Nuux Dhuulle,Yoonis Cali Nuur,Maxamuud Xasan iyo Cabdi Siraad oon aad uga faa’iday khibradoodii”.